I-Compostable Paper Cup, i-Biodegradable Paper Cup, i-Pet Lid-Futur
IKit yokusika amaplanga
Uya kujongana nelona shishini lithembekileyo kunye neqela.
Ngokusebenzisa ulwazi lwethu lweshishini, izisombululo ezitsha kunye nobuchule bokuthengisa, sinokukunceda ufumane isabelo sentengiso kwaye ukhulise ishishini lakho.Imveliso yethu kunye nokusebenza kakuhle kwekhonkco iqinisekisa ukuba uhlala unezona zisombululo zixabisa kakhulu.
I-Futur Technology- umthengisi kunye nomvelisi wokupakishwa kokutya okuzinzileyo e-China.Umsebenzi wethu kukudala izisombululo zokupakishwa ezizinzileyo nezinokuvundiselwa eziluncedo kwiplanethi yethu nakubathengi.
Sisebenzisa izixhobo ezivuselelekayo njengezinto ezifana ne-PLA ezenziwe kwisityalo-ingqolowa, i-bagasse, i-paperboard..etc.
Ukwenza imveliso entsha, kufuna itekhnoloji entsha iinkqubo ezintsha ukuze yenzeke.Senza nzima kwaye sizama ukwenza ngcono yonke imihla.
Itshintshela kwipakethe entsha kunye nezinzileyo kwihlabathi liphela.Ngokusebenzisa abantu bethu kunye nobuchwepheshe obutsha, senza iimveliso zokupakisha ezintsha ukuhlangabezana nezicelo ezitsha zomthengi yonke imihla.
I-FUTUR yokupakishwa okuvundisiweyo iphelela kwindawo yokulahla inkunkuma, iya kuphuka ngokukhawuleza kunekomityi yeenkuni njengoko isekelwe kwisityalo kwaye ayiyi kushiya iplastiki eyingozi ngasemva.
ISUPHU EZA KUHAMBA
Ikomityi yephepha enye eludongeni
Ixesha elifutshane lokuKhokela eTshayina i-5oz yokuPringing ngokweSiko ...
Elona xabiso lilungileyo eTshayina I-Eco-Friendly Biodegrada...
Ababoneleli beBhokisi yePhepha eliBonekayo...
Abavelisi bePlastiki eBonekayo yePlastiki Sup...
Ubonelelo lweOEM China Biodegradable Compostable Spou...
I-Biodegradable Disposable Kraft Paper Bowl Compa...
Ukubuza malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye kuthi kwaye siya kunxibelelana kwiiyure ezingama-24.
Iincwadana zethu, ulwazi lwamva nje malunga neemveliso zethu, iindaba kunye nezibonelelo ezikhethekileyo.
Ukutya okuZinzileyo, Iphi Indlela? Intsingiselo yeengqikelelo ezizinzileyo kwishishini lehlabathi lokutya sele iqalile ukuvela, kwaye imeko yexesha elizayo inokulindelwa.Zeziphi iindlela zovavanyo lweendawo zokutyela ezizinzileyo?...
Ukutya okuzinzileyo, uphi uT...
Lixesha lokuphinda ujonge umsebenzi wonxibelelwano wokupakisha Nokuba licala lebrand okanye umthengi, bonke bayavumelana nesi sivakalisi: owona msebenzi uphambili wokupakishwa lunxibelelwano.Nangona kunjalo, kugxilwe kula maqela mabini ...
Lixesha lokuphinda undwendwele iC...
Funda ukuPakisha okuZinzileyo kwiimpawu ezaziwayo-kakuhle Uqhutywa luphuhliso oluzinzileyo, amagama amaninzi emizi kwimpahla yabathengi aphinda acinge ngokupakisha kwaye abeke umzekelo kuzo zonke iinkalo zobomi.Izixhobo ezivuselelwayo zeTetra Pak + Phendula...
Funda ukuPakisha okuZinzileyo kwi...